O doro anya na hasntanetị agbanweela n'ụzọ dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ, nke ahụ bụ eziokwu maka otu ụlọ ọrụ si azụ ahịa azụmaahịa ha n'ịntanetị. Onye ọ bụla nwere azụmaahịa chọrọ naanị ileba anya na ọnụọgụ mgbanwe Google mere na nyocha algorithm ya iji nweta nghọta bụ isi banyere etu esi ere ahịa ntanetị agbanweela oge.
Lọ ọrụ ndị na-azụ ahịa na ịntanetị dị mkpa ịkwado usoro ịzụ ahịa ha oge ọ bụla enwere mgbanwe na nchọta algorithms, ma ọ bụ enwere ike ịhapụ ha ruo ebe ahịa ha na-ata ahụhụ. Bob Holtzman nke Mainebiz.com ewepụta ya n'ezoghị ọnụ:
Were peeji a si Cleveland Shutters ọmụmaatụ. Isiokwu nke peeji ahụ gụrụ: Nwere windo n'ọnụ mmiri? Achọrọ ihe ngwọta na-arụ ọrụ? N'ebe ahụ, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na ọ na-ekwu okwu banyere nsogbu ndị na-ekiri nwere ike ịnwe.
Ugbu a, ihe na - eme ka ibe a dị iche bụ na ụlọ ọrụ anaghị aga nnukwu mgbidi ederede iji kọwaa ihe mmadụ nwere ike iji windo mmiri mee; o gosiri onye nleta usoro ihe onyonyo nke gosiputara ihe ngwọta nye nsogbu. Onye nwere ike ịbịa na-achọ azịza ọ bụghị naanị nwere ike ịchọta, mana ọ nwere ike ịhụ otu ngwaahịa Cleveland Shutters si bụrụ azịza na-enweghị mkpọsa ọdịnala.
Ndị ọkachamara na-ekwukwa na ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ekwentị ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ire ahịa n'ọdịnihu. "Ntuziaka nke ebe a na-achọkwu nyocha na ekwentị mkpanaaka karịa kọmputa ndị na-anọghị ọdụ na-abịa ọsọ ọsọ karịa ọtụtụ ndị na-eche," ka Google's Search Engineer Matt Cutts kwuru. "M ga-enwe anya ma ọ bụrụ na anyị na-adịghị anya na-mobile peeji ọsọ n'ime akaụntụ maka SEO."
“Ndị na-eji ekwentị n’fersntanet agagharị bụ ụyọkọ na-achọ ihe dị ukwuu. Ọ bụrụ na ha gaa na webụsaịtị gị ma ewepụtaghị ya maka ngwaọrụ ha na-eji yana ụzọ dị iche iche ndị ọrụ mkpanaka si akpa agwa, ha ga-ewe iwe ma pụọ, ”ka Ken Barber, osote onye isi ahịa nke mShopper.com na-ekwu.